Coinbase iqala ukuhlolwa lokugcina Segwit - Blockchain Izindaba
Februwari 6, 2018 admin
Coinbase iqala ukuhlolwa lokugcina Segwit
Coinbase umemezele ku-Twitter ukuthi Bitcoin SegWit ukuhlola ngezigaba zayo kokugcina, futhi izotholakala Bitcoin ukuthumela nokwamukela e “emasontweni ambalwa ezayo.” Lokhu yakhelwe ukunciphisa imali Bitcoin futhi izikhathi ukudluliswa, futhi eminye ukunciphisa umthwalo inethiwekhi yayo.
BTC: USD ngazimbili ku Coinbase sika GDAX exchange-akhawunti mayelana 5% nsuku zonke ukuhweba ivolumu bitcoin sika, ngokuvumelana CoinMarketCap. Uma ungeza kwesinye Coinbase nomdayisi BTC isevisi, enye imali ngazimbili kanye nezinye zokukhokhelwa kungcono ukuphetha ngokuthi ingxenye enkulu ukuthengiselana nsuku kwenzeke ngokusebenzisa Coinbase / GDAX.
Ngokunjalo lokhu ukuthuthukiswa kungenzeka feasibly nethonya ukubonakala ku global izikhathi Bitcoin kuthengiselana kanye nezimali.
Okusanda, Japan yabamba zasetafuleni blockchain ngoba amabhange amakhulu nabalawuli
Lwezezimali Se Japan ...
Thumela Previous:Ngokwesibonelo, emazweni ahlukahlukene, amanani bitcoin ingahluka
Thumela Landelayo:ezine kuphela Ukuhwebelana Crypto ukulalela izimfuneko umlamuli South Korean